“QUUDI HAL QOF OO BAAHAN” | Somaliska
“QUUDI HAL QOF OO BAAHAN”
Waxaan badankeen aragnay ama aan akhrinay dhibaatada abaaraha ee ku habsatey dalkeenii soomaaliya. Waxaa dhacday abaar iyo cunto la`aan aan taariikhda horay loogu arag. Taasi waxaa ay keentay in boqolaal muwaadiniin soomaali ahi ay baaba àan una dhintaan silic, gaajo iyo darxubo. Maydadkii caruurta, hooyooyinka iyo duqeyda soomaaliyeed ayaa jidadka daadsan.Xitaa waxaa tabar loo waayey in la duugo. Haddaba walaalayaal waxaa dhamaanteen waajib inagu ah inaan wax ka qabashada arinkaas u istaagno. Walaahi ilaahay waa ina weydiinayaa cuntada qaboojiyaha inoogu jirta. Bal ka feker iyadoo caruurtii soomaaliyeed iyo hooyooyinkii gaajo u dhimanayaan ,inaguna aan kala dooraneyno cuntadii aan cuni lahayn. War aaway dhiigii islaamnimada, war aaway dhiigii soomaalinimada. Maanta waxaa ay taagan tahay waxii dhiig lahoow kaca. Wax badan baan qaban karnaa ee aan fadhiga ka kacno. Waxaan dhamaan ummada soomaaliyeed meel ay joogaanba aan kula talinayaa iney bilaabaan olole aan ugu magac dareyno: ”QUUDI HAL QOF OO BAAHAN”
Ololaha ” Quudi halqof oo baahan” waxaan uga qayb geli karnaa sidaan:
1. Magaalo iyo tuulo kasta soomaalida joogtaa waa iney isxilqaamaan oo is abaabulaan.
2. Waa in qof walbaa iska soo jaraa waxii dhaqaale ah oo ka go à si dadka dhiban loogu diro,waa magaalo/tuulo kasta dadka joogaa lacagta meel kuwada ururiyaan.
3. Waa in la wargeliyaa dadka kale ee muslimiinta ah oo lagu booriyaa iney sadaqo la baxaan
4. Waa in masaajidada la tagaa oo laga soo ururiyaa waxii tabarucaad ah ee laga heli karo
5. Waa in qofkii ama ururkii awoodaa uu la xiriiraa ururada caalamiga si loogu dhiiri geliyo in ay kaalmo soomaaliya la gaaraan.
Walaalayaal haddii aynu qodobadaas ku dhaqaaqno wax badan baan qaban karnaa. Ololaha ”quudi hal qof oo baahan” waxaa uu ka socdaa magaalooyin badan oo Iswiidhan ah ee walaalow ama walaaley adiguna bilow hadda. Intii aad maqaalka akhrineysey dhowr caruur ah oo soomaaliyeed ayaa gaajo u dhintay ee ogow
War aan meesha ka kacno oon u gargaaro walaalaheena dhiban kolkaan sidaas yeelo ilaahay baa inoo gar-gaari doona aduun iyo aakhiroba.
Ka bilaw magaaladaada Ololaha ” QUUDI HAL QOF OO BAAHAN”
C/RISAAQ M XUSEEN
ESKILSTUNA . SWEDEN
Yaa u maqan Soomaaliya? [Video]
quud hal qof oo bahan says:
asc walal yaal halkeen ugu aaadin karaa dadkaan bahan tel,ama gudi,mahadsanidiin
waa run waana bixininaynaa waxaanse wataa hal sharad waa in dadkaas la gaarsiya waxaan bixino, ma yeelayno shirkad magaca dadka ku qaraabata oo dalxiis ugu baxdo lacagahaan dhiibno hadii kale yaysan magaca dadkeena ku qaraaban. waliba meelaha umadu ku baaba ayso waa inay geeyan, sida dhadhaab iyo muqdisho hadii aysan inta kale oo alshaabka ku hoos baa ba aysa gaarsin karin waa in meelaha ay gayn karaan geeyan. shirkada adyo magaceeda la dhaho oo somaliska aad soo gudbiseenbaana bilkasta waxaan awoodo ku soo dirin shaqsi ahaantayda. mahadsanidiin walaal
C/risaq Hussein says:
salaaman tihiin, dhamaantiinba. waa sax in wax kasta oo la ururiyaa ay gaaraan dadka dhiban. taasi waa muhiim iyo weliba lagama maarmaan. Maqaalku waa dhiiri gelin iyo weliba talo bixin. Waa in dad kasta oo meel magaalo ah ama tuulo ah wada joogaa ay tashadaan oo ay waxa ay heli karaan isku daraan. Una diraan hadba halka ay u gartaan. Uma baahnid inaad qolo kale ama dad aadan aqoon wax u dhiibtid. Intiina meel wada joogtaa is abaabula ka dibna u dira inta aad heshaan meesha ku haboon.
C/risaq M Hussein
Waa arin aad u wanagsan o la isku dhiiri kaliyo,waana malintii an aad isku caawin lahayn, kaso qaad naftaada sidee noqon lahay hada wayso biyo o nolasha ugu muhiimsan.
Wlh malin aya xasusta o xafadii tubadi biyaha naka go,day dameradi biyahana waxay noqdeen cariiri damerki biyaha o naka so dahay kaliya aya sugi waynay. Malintuna wa bisha marso o aad garanaysan xamar inay aad u gulushahay waxa garnay duhurkii waa qayliya waxana dhaha aabe biyo hooyo biyo mahaysto waxa ku qubaysto biyo isiiya, bal kawarama qubays biyihis aya sugi wayey, biyo an cabo hada wayo side noqon lahaa.
wlh aniga waxa yalahaas aan kudhahay walidkey dhel dhel waye marka laka ego walalahay dhibatada coolada iyo gaajada hayso o an haysan cid ugargaarto o an aheyn allhii uumay
Walalahay ha,ogaadan qof walba waxuu baxsado aya kayd u ah, malin aan manta ahayn ayuu u baxsana insha allah
Qof walbana sadaqaduu baxsado allah aya ka,abal marina,ma,ahan inuu dhaho waa lamusuq maasuqay, adigu niyayso inad sadaqo ahaan ubixisay o walalaha dhiba taysan ad cawinayso, qofkii musuq masuqa iyo kidhibaba allah aya laxisabtamaa
Balanteenuna waa inaa caawina walalahayn gaajaysan,si bari hada gajaysano allah noo caawiyo.
Cabdirisak maan iraa mase Habdirisak sidi loo dhigaba walaal
artikel qurux badan aad soo qortay Ajir Allaha kaasiiyo wlh umada Somaliyed biriga ayaaa loo bahan in loo kaalmeeyo sideey ila tahay hadaan kasoo qaado reer sweden ma,aqaan meelah kalee 20,25 ta waxaa adeega loo doontaa Willis,,LDl Ica iwm kawarama walaalihiin oo gawsahooda biya kada,aayaan oon meelna adeeg ka doonaheeyn ilaa kedka Allah maahane. risaqa Alaah idin siiyay wa ledinku damoonaa saad u maamushiin malinta Yawmal Qiyaamana waa ledin su,aalaaa intaad kashaqeyseen iyo intaad ku bixiseen?
Sida aw sheegay qoraha maqaalka qof walbo meesha aw joogo haka bilaabo orod iyo guluf waxaa lagu maahmaahaa qojoxo geel wax gunti lagalsho kaweeyn waxaan ula jeedaa dadkiina yurub kukor ah aan idiin macneeyee abaarta biriga kajirto somalia maaahin mod qarsoon ama leskaga sheeynaayo waa mid cadd oo indhoole iyo dhagoole ayka war qabaan- Ra-yi ahaan waxeey ila tahay asxbta so booqato Somaliska.com ineey furtaan akon ayku mideeysan yihiin ayna yeeshaan xariir joogto ah waloow 10 sek haku ahaato bishi hadii lagu soo shubo wax ayeey tari kartaaa iniix masago qaaja ficiis ah ayuu reebaa asc